App Store yekutsvaga kutadza inoratidza zvisirizvo mhinduro | IPhone nhau
App Store Kutsvaga Kukundikana Kunoratidza Zvisirizvo Mhedzisiro paIOS neMac
Panguva ino, vamwe vashandisi vari kusangana matambudziko ekutsvaga maapps muApp Store iOS neMac. Dambudziko nderekuti, sezvaungaona mune yapfuura skrini, kana uchitsvaga zvakakosha zvinoshandiswa seSpotify kana chero yeGoogle, izvo mhedzisiro inoratidza zvishoma kana hapana zvine chekuita nezvataitarisira kuwana, kuva izvo zvimwe zvakafanana nezvenyaya yaSpotify application "Pro Music Player & Playlist Maneja weSpotify Premium" iyo, kunyange zvakadaro, inowanikwa munzvimbo yechina.
Dambudziko hariratidzike sekuremekedza chero chakajairwa uye kunyangwe Xcode, iko kunyorera kugadzira maapplication eese Apple zvishandiso, haioneke kana tikatsvaga mu Mac App Store. Kune rimwe divi, vamwe vashandisi vari kuona mafomu eApple muchikamu che "iPad chete" uye zvinopesana. Pakupedzisira, dai vakaisa izvo zvinoshandiswa uye zvikamu mu blender, izvi zvaigona kuve mhedzisiro.
Iyo App Store inoshaya kutsvagwa kwakawanda
Panguva yekunyora uku, iyo Apple Services Status peji hairatidze zvikanganiso, asi Apple Tsigiro yakatosimbisa kuti vanoziva dambudziko riripo vari kugadzirisa mhinduro. Pasina imwezve data, isu tinogona zvakare kufunga kuti Apple iri kuita shanduko kuApp Store, chimwe chinhu chakataurwa nezvacho kubvira Phil Schiller atora akasiyana akasiyana Apple application zvitoro.
Parizvino, chinhu chega chatinogona kuita kuwana maapplication asingaonekwe mukutsvaga seSpotify kutsvaga muGoogle kana zvimwe zvinjini. Iko kusarongeka kwekutsvaga kuripo zvakare muSotlight uye mune Safari mazano. Kana, seni, ukashandisa DuckDuckGo kutsvaga paInternet, unogona zvakare kushandisa iyo bang Ndafunga "! Ituneses yekutsvaga", pasina makotesheni uye kutsiva "tsvaga" nezvose zvatinoda kutsvaga uye mhedzisiro yezvitoro zvakasiyana zvekuSpanish zvichaonekwa, senge iTunes, App Store uye iBooks Chitoro. Kusvikira vagadzirisa bug, chimwe chinhu chatingaite kuva nemoyo murefu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » App Store Kutsvaga Kukundikana Kunoratidza Zvisirizvo Mhedzisiro paIOS neMac
Blackberry's mameseji app, BBM, inogonesa vhidhiyo kufona paIOS uye Android